कांग्रेसलाई झलनाथको प्रश्न, '२०४६ सालदेखि के हेरेर बसेका थियौं' (भिडियोमा) - Kendrabindu Nepal Online News
कांग्रेसलाई झलनाथको प्रश्न, ‘२०४६ सालदेखि के हेरेर बसेका थियौं’ (भिडियोमा)
काठमाडौं । पुर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ठूलो संख्यामा युवाहरु विदेशिनुमा नेपाली कांग्रेस जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन् । काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नम्बर १५ ले नयाँ बर्षको सन्र्दभमा शनिबार भुईखेलमा गरेको कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेकपाका नेता एवं पुर्व प्रधानमन्त्री खनालले सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला नेपाली कांग्रेसले केही गर्न नसकेका कारण युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य भएको बताए ।
२०४६ साल यता पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले अवसर पाउदा मुलुक र मुलुकवासीका लागि उपलब्धिमुलक काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, “नेपाली कांग्रेसका साथीहरुले हामी गर्छौ भनेर अहिले गफ लगाउनुभएको छ । तर ४६ साल पछाडि अवसर प्राप्त भएको हैन ? पटक पटक बहुमत प्राप्त भएको होइन । तर के गर्नुभो ? सारा देशलाई गरिवीमा डुबाउनुभयो । सारा देशमा वेरोजगारीमा डुबाउनु भो । आज झण्डै ५० लाख भन्दा बढी युवाहरु विदेशमा जान बाध्य भईरहेका छन् । यो बाध्यता खडा गर्यो कसले ? नेपाली कांग्रेसका साथीहरुलाई म एक पटक आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्न भन्न चाहन्छु । ”